sare u qaadida soojiidashada tuubbada birta naxaas ah ee tuubbada birta aan jugta lahayn
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka / naxaas ku noqo birta birta ah
naxaasti bir ah oo bir aan bir jabin
Categories: Codsiyada, Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka, Mashiinka brazing induction Tags: naxaasti bir ah oo bir aan bir jabin, kululaynta naxaasda kululaynta leh, birta naxaas ah, tuubada naxaasta ah ee HF brazing, tuubbada caleemaha indhaha, galinta naxaas ah ee tuubbada birta, tuubo indho-furid ah, tuhun galinta tuubbooyinka naxaas ah, Mishiinka Sedaxda, unugyada birbaraynta
Soo-jiidashada tuubbooyinka naxaas ah ee tuubbada birta ah Bamamka Cilmiga Maskaxda iyo Guryaha.
DW-HF-15kw / 25KW / 45KW Qalabka kululeynta la-galinta
Tuubbooyinka Cryogenic iyo Guryaha - Furka naxaasta ah (2 ”(25.4mm) OD, 3” (76.2mm) dherer ah, 0.15 ”(3.81mm) darbi qaro weyn ah, wuxuu ku fadhiyaa birta birta ah 1.4” (3.81mm) qoto dheer) (1.7 ”(43.18mm) OD, 6” (152.4mm) dherer ah kuna dhegan cufka weyn goorta ay dhamaato, 0.1 ”(2.54mm) dhumuc weyn.)
Heerkulka: 1145 ° F + (618 ° C)
Time: Ka yar 40 sekan
Tuubbooyinka Cryogenic iyo Housings - Gacanta copper (3.6 ”(91.44mm) OD, 0.1” (2.54mm) derbi qaro weyn oo 2.7 ”(68.5mm) dherer ah, 3.8” (96.52mm) OD dibnaha OD ee hoose ee 0.6 ”( 15.2mm) dherer ah oo dhumucdiisuna waa qiyaastii 0.85 ”(21.5mm), qeybna bushimaha waa guud ahaan dhererkiisu waa 3.14” (79.7mm) dhererkiisu guud yahay, shafka SS wuxuu fadhiyaa 2.66 ”(67.5mm) qoto dheer), SS Shaft (3.4” (86.3mm)) OD, 3.2 ”(81.2mm) Aqoonsi, in ka badan 7.5” (190.5mm) dherer ah, wuxuu leeyahay koofiyad yar yar iyo xarig weyn oo ku lifaaqan hal dhinac iyo saldhig weyn oo 8 ”(203.2mm) dhinaca kale ah)
Time: 1 daqiiqo 30 ilbiriqsi ilaa 3 daqiiqo
Tuubbooyinka Cryogenic iyo Guryaha - Gacanta copper (3.5 "(88.9mm) OD, 0.1" (2.54mm) derbi qaro weyn oo 2.1 ah (53.3mm) dherer ah, 5.3 "(134.6mm) OD dibnaha OD ee hoose ee ah 0.74" ( 18.7mm) dherer ah oo dhumucdiisuna waa qiyaastii 1 ”(25.4mm), qeybna bushimaha waa dhererkiisu yahay 2.8” (71.1mm) dherer ahaan, birta birta xarkaha ah waxay fadhiisataa 2.66 ”(67.5mm) qoto dheer, bir bir daloola (3.35” (85.0 mm) OD, 3.2 ”(81.2mm) Aqoonsi, in ka badan 7.5” (190.5mm) dherer ah, wuxuu leeyahay koofiyad yar yar iyo xarig weyn oo ku dheggan hal dhinac iyo saldhig weyn oo ah 5.5 ”(139.7mm) dhinaca kale ah)
Time: qiyaastii 20 illaa 30 sekan
Bambooyin Cryogenic iyo Guryo - Koofiyad Copper (2.7 "(68.5mm) OD, 2.85" (72.3mm) sare, 0.6 "(15.2mm) derbiga, wuxuu ku fadhiyaa usheeda dhexe ahama 1.4" (35.5mm) qoto dheer), 1.54 "(39.1mm) OD, 0.9" (22.8mm) gidaar qaro weyn, 6.5 ″ (165.1mm) sare oo ku lifaaqan xajmi weyn marka uu dhammaado ) OD, 2.44 "(61.9mm) sare ama ka badan, 0.8" (20.3mm) kor ayuu saaran yahay dhererkiisuna waa 0.88 "(22.35mm) dheer oo leh 1.4" (35.5mm) ID
Time: 1 daqiiqo 50 ilbidhiqsi
Imtixaanka 1: Imtixaanku wuxuu ku bilaabmay xoog aad u hooseeya wuxuuna ku dhacay 25 kW ka dib 15 sekan. Gujisidda la-qabsashadu way guuleysatay.
Waxaa lagu taliyay in la isticmaalo isku-dhafka adag oo duubaya ku dhawaad ​​kalabarka badhanka naxaasiga ah. Tani waxay diirada saari doontaa kuleylka kaliya meesha ay ku taaly halka ay biyuhu ku badan yihiin waana in ay yareeyaan waqtiga kuleylka.
Imtixaanka 2: Tijaabadu waxaa lagu sameeyey gariiradda weyn sababo la xiriira arrimo nadiifin ah oo uu bushimaha qaybtooda ka abuuray. Waqtiga qiyaasta wareegga buuxa waa 20 illaa 30 ilbiriqsi. Joogtaynta hoose waxay umuuqatay inay faa iido u tahay arjiga iyagoo sababaya in dhulku si qoto dheer u dhex maro naxaasta iyo birta lafteeda, taasoo keenta waqtiyo kuleyl dhaqso leh.
Imtixaanka 3: Tijaabada waxaa lagu sameeyay 14 kW si loo mideeyo wareegga waqtiga lagama maarmaanka u ah DW-HF-15KW nidaamka kuleylka induction. Qeybtani waxay u baahan doontaa waqtiga kuleylka ugu dheer sababtoo ah tirada naxaasda. Waqtiyada kuleylka waa la yareyn karaa iyadoo la adeegsanayo koronto weyn.
Waqtiyada kuleylka ee baaritaanada oo dhan waa la wanaajin karaa markii la wanaajiyo xirmooyinka kuleylka kuleylka qaybaha gaarka ah iyo hoos u dhigidda inta jeer. Xakameeyaha heerkulka iyo qalabka loo yaqaan 'pyrometer' waxaa si xoog leh lagula talinayaa in la hubiyo in waxyeello aan loo gaarin qaybaha haddii ay ku socdaan nidaam la-galinta ballaaran. Haddii la isticmaalayo nidaamka kuleylka kuleylka ah ee 15kW, xakameynta heerkulka iyo qalabka loo yaqaan 'pyrometer' ayaa weli lagu talinayaa laakiin halista burburka qayb ayaa la dhimay.
Kuleylinta ku-talagalka Geedi-socodka Foomka Kulul
talooyinka carbide ee loo adeegsado bilowga